Play Station2ရဲ့ Stick ထဲ ဂိမ်းသွင်းပြီး ဆော့လို့ရတဲ့နည်း...[Game]
Myanmar IT Resource Forum » TEMPORARY PLACE » » Unknown Discussions » Play Station2ရဲ့ Stick ထဲ ဂိမ်းသွင်းပြီး ဆော့လို့ရတဲ့နည်း...[Game]
1 Play Station2ရဲ့ Stick ထဲ ဂိမ်းသွင်းပြီး ဆော့လို့ရတဲ့နည်း...[Game] on 1st August 2010, 5:20 pm
PlayStation2နည်းပညာက Memory Card ထဲမှာ Boot Software ထဲပြီး Stick ထဲမှာ ဂိမ်းထဲပြီးဆော့ရတာပါ။ ၄င်း Boot Software က Internet မှာ Free ရပါတယ်။ နာမည်ကိုက Free MCBootပါ။
ဒီလိုမျိုုုး Game ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Game ခွေ ခဏခဏဝယ်စရာမလိုခြင်း
ဒီ နည်းပညာကို် ထည့်သွင်းချင်လျှင် မင်္ဂလာမွန်စျေးမှာ ထည့်သွင်းနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်
Memory Card ကို Boot ထည့်ချင်လျှင် အဖွင့်ထည့်လျှင် ၅၀၀၀ လို့သိရပြီး အပိတ်ထည့်လျှင် ၃၀၀၀ လို့သိရပါတယ်။
Game တစ်ခွေထည့်လျှင် ၅၀၀ ရလို့သိရပါတယ်။
အဲဒီတော့ကိုယ်ကိုတိုင် ဘယ်လိုထည့်ကြမလဲဆိုတာကို သိတဲ့သူများ ကျွန်တော်နဲ့အတူ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
Last edited by ayoe88 on 19th August 2010, 11:46 pm; edited 1 time in total
2 Re: Play Station2ရဲ့ Stick ထဲ ဂိမ်းသွင်းပြီး ဆော့လို့ရတဲ့နည်း...[Game] on 2nd August 2010, 12:31 pm
ပိုးစိုးပက်ဆက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ PS2 စက်ကြီးသမားတွေ Lens and Network card (for extend HDD) ဖိုးသက်သာသွားတာပေါ့... Laptop harddisk ကနေ USB နဲ့ run လို့ရပြီ...
3 Re: Play Station2ရဲ့ Stick ထဲ ဂိမ်းသွင်းပြီး ဆော့လို့ရတဲ့နည်း...[Game] on 19th August 2010, 9:19 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-05-15
I want to run PS2 Game on my PC without stick.Can you teach me please?I want to how to make it.Please tell me step by step.
4 Re: Play Station2ရဲ့ Stick ထဲ ဂိမ်းသွင်းပြီး ဆော့လို့ရတဲ့နည်း...[Game] on 19th August 2010, 11:58 pm
PS2 Game ကို PCမှာ run လို့မရပါဘူး
5 Re: Play Station2ရဲ့ Stick ထဲ ဂိမ်းသွင်းပြီး ဆော့လို့ရတဲ့နည်း...[Game] on 20th August 2010, 6:56 pm
6 Re: Play Station2ရဲ့ Stick ထဲ ဂိမ်းသွင်းပြီး ဆော့လို့ရတဲ့နည်း...[Game] on 21st May 2011, 11:07 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2011-05-21
ဟုတ်တယ်ဆော့လို့ရတယ်..အခုအဲ့ဒီလိုမျိုးတော်တော်ခေတ်စားနေတယ်..ပြီးတော့ pc နဲ့ ps-2 နဲ့ network ကနေ game back-up file ကို share လုပ်ပြီးဆော့တာလဲခေတ်စားနေတယ်..သိတဲံ့သများဖြေပေးကြပါ
အခုလိုနေတာက ps-2 ကို exploit လုပ်ဖို့လိုနေတာ.. modchip/ swap-magic/ exploit MC တစ်မျိုးမျိုးနဲ့လုပ်ရမယ်ပြောတယ်.. swap-magic disc ကိုရှာဝယ်လို့ရတဲ့နေရာလေးများသိတဲ့သူပြောပြပေးကြပါ..
7 Re: Play Station2ရဲ့ Stick ထဲ ဂိမ်းသွင်းပြီး ဆော့လို့ရတဲ့နည်း...[Game] on 28th February 2012, 2:23 am
တည်နေရာ : မူဆယ္
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2012-02-27
အခု Playstation2Game ကို Hard Disk တြဲျပီး​​ေဆာ့တာ ကိုက္ညီမွုမရိွတဲ့ဂိမ္း​ေတြ​ေတာင္မွ ​ေဆာ့လို့ရ​ေန ျပီလို ့သတင္း ျကားပါတယ္ Memory Stick ထဲကို Software တစ္ခုထည့္ရတယ္လို ့ျကားမိပါတယ္ အဲ့ဒီ Software နာမည္​ေ လးသိခ်င္ပါတယ္
ခင္ညာ တစိတ္​ေ လာက္ ကူညီက်ပါ ဦး ခင္ညာ
8 Re: Play Station2ရဲ့ Stick ထဲ ဂိမ်းသွင်းပြီး ဆော့လို့ရတဲ့နည်း...[Game] on 28th February 2012, 2:37 am
9 Re: Play Station2ရဲ့ Stick ထဲ ဂိမ်းသွင်းပြီး ဆော့လို့ရတဲ့နည်း...[Game]